Lenovo dia mitarika ny fomba fampandoavana ny Apple Magic Mouse | Avy amin'ny mac aho
Lenovo dia mitarika ny fomba famandrihana ho an'ny Apple Magic Mouse
Raha tiako ny Apple Magic Mouse dia tsy azo atao ny mahatakatra ny fomba nananan'izy ireo ny "hevitra mamirapiratra" nametrahana ny mamoaka seranan-tsambo eo ambanin'ny totozy mamela ny peripheral tsy misy ilana azy rehefa mamaly.
Amin'ity lafiny ity dia mila milaza isika fa ny fiovan'ny Apple amin'ity Magic Mouse ity dia nitranga tamin'ny fotoana nanirian'izy ireo nanampy bateria azo averina soloina hanoloana ireo bateria mahazatra. Ity dia zavatra azo ahitsy nandritra ny fotoana ela nefa Tsy mbola nahita fiovana tamin'ny fomba fiasa sy ny toerana misy an'ity seranana ity izahay.
Lenovo dia manolotra totozy tsy misy tariby miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby
Ary toa tsy dia sarotra loatra ny manampy ny hazakazaka tariby amin'ireo peripheraly ivelany araka ny hitantsika na hitantsika amin'ireo marika hafa. ankehitriny Lenovo dia nanolotra ny Lenovo GO, totozy miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby ary tsy misy tariby tanteraka izany.
Ho fanampin'izany, ity totozy Lenovo vaovao ity dia mamela na mifanentana amin'ny famandrihana Qi ka mifanaraka daholo na ny fotony. Ary fantatsika rehetra izany misy tokoa ny dozy famerenana mat-toy ny mat-ka dia hofenoinay ny totozy mandritra ny ampiasainay azy. Saingy amin'ity tranga ity dia manampy koa i Lenovo karazana "bateria ivelany" izay ahafahako mamoaka ny Mouse sy ny peripheraly hafa noho ny port USB C ampidiriny.
Mbola tsy takatray ihany ny fomba tsy nanampian'i Apple amin'ny taranaka vaovao iMac na nanovana ny seranan-tsolosaina amin'ny Magic Mouse (miampy ny fampidirana ireo loko tsara tarehy ireo) hamela ny famandrihana rehefa manao. Raha tsy te hampiditra fantsom-pifandraisana tsy misy farafaharatsiny ianao dia ovao ny toerana misy ny seranan-tsambo mba hahafahan'ny mpampiasa mameno azy io rehefa mampiasa azy ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Lenovo dia mitarika ny fomba famandrihana ho an'ny Apple Magic Mouse